उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्र कति शक्तिशाली ? – Janamanch.com
उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्र कति शक्तिशाली ?
उत्तर कोरियाले दुई महिनापछि बुधबार पुनः अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्‍यो। ह्वसङ–१५ नामक यो नयाँ क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको मुख्यभूमिसम्म पुग्ने उत्तर कोरियाको दाबी छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार किम जोङ उन आफैँले बिहान ३ बजेका लागि यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने आदेश दिएका थिए। ‘पार्टी र मातृभूमिका लागि बहादुरीपूर्वक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर!’ किम जोङ उनको आदेश थियो।
क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि पनि किमले उत्तर कोरियाले ‘अन्ततः आणविक शक्तिसम्म राष्ट्र बन्ने लक्ष्य पूरा गरेको गौरवपूर्ण घोषणा’ गरे। उत्तर कोरियाको परीक्षणपछि अमेरिकाले सबै राष्ट्रलाई सो देशसँगको कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठकमा बोल्दै अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले उत्तर कोरियाली कदमले विश्वलाई ‘युद्धको निकट’ पुर्‍याएको दाबी गरिन्। उनले युद्ध सुरु भए उत्तर कोरियालाई ‘पूरै ध्वस्त’ पारिने चेतावनी पनि दिइन्।
परीक्षणअघि ह्वसङ-१५ को निरीक्षण गर्दै किम जोङ उन
यसै विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग पनि फोनावार्ता गरे। ट्रम्पले सीलाई उत्तर कोरियातर्फ तेल निर्यात बन्द गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। त्यतिमात्र होइन क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि ट्रम्पले किम जोङ उनमाथि पुनः व्यक्तिगत टिप्पणी गरेका छन्। उनले किमलाई ‘लिटिल रकेट म्यान’ र ‘सिक पप्पी’ नाम दिएका छन्।
उत्तर कोरियाले सेप्टेम्बरको सुरुमा हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको बताएपछि ट्रम्प र किमबीच यस्तै व्यक्तिगत तहको जुहारी चलेको थियो। उत्तर कोरियाको नयाँ क्षेप्यास्त्र ह्वसङ–१५ यसअघि परीक्षण गरिएको ह्वसङ–१४ भन्दा निकै ठूलो र प्राविधिक रुपले आधुनिक रहेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन्। उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले बुधबार परीक्षणको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्।
उत्तर कोरियाका अनुसार सो क्षेप्यास्त्र ४४७५ किलोमिटर उचाइमा पुगेको थियो। उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो उचाइ हो। यो उचाइ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनभन्दा १० गुणा माथि हो। सो क्षेप्यास्त्र ५३ मिनेटको अवधिमा ९५० किलोमिटर पर गएर जापानी समुद्रमा खसेको जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका सेनाले पुष्टि गरेका छन्।
यो अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षणबाट उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हात पारेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन्। उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गरेको फोटोमा ह्वसङ–१५ ह्वसङ–१४ भन्दा ठूलो र लामो देखिएको छ। ‘सतहमा हेर्दा यो क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको सम्पूर्ण भागमा प्रहार गर्नसक्ने खालको देखिन्छ,’ जेम्स मार्टिन सेन्टर फर ननप्रोलिफरेसन स्टडिज (सिएनएस) का डेविड स्मर्लरको भनाइ सिएनएनले उधृत गरेको छ।
ह्वसङ-१५ परीक्षणको घोषणा गर्दै उत्तर कोरियाली सरकारी टेलिभिजन
‘यो क्षेप्यास्त्र उत्तर कोरियाका लागि मात्र होइन, सामान्य रुपमा सबैका लागि ठूलो क्षेप्यास्त्र हो,’ सिएनएसकै माइकल डुइट्सम्यान भन्छन्, ‘यत्तिको ठूलो क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्ने राष्ट्रहरुको संख्या धेरै छैन।’ यसको अर्थ उत्तर कोरिया पनि आधुनिक र शक्तिसम्पन्न क्षेप्यास्त्र प्रणाली भएका केही देशहरुको समूहमा सामेल भएको छ।
अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहारका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्ः पहिलो अन्तरीक्षसम्म पुग्ने, दोस्रो पृथ्वीको चक्कर लगाउने र तेस्रो पुनः वायुमण्डलमा प्रवेश गरेर निशानामा जाने। यी सबै चरणका लागि यस्ता क्षेप्यास्त्रमा बेग्लाबेग्लै इञ्जिन हुन्छन्। उत्तर कोरियाले यसअघि परीक्षण गर्दै आएको ह्वसङ–१४ मा भने एक प्राथमिक इञ्जिन र क्षेप्यास्त्रलाई निशानामा डोर्‍याउने चार स्टेयरिङ हुन्थ्यो। तर ह्वसङ–१५ मा चाहिँ दुई ओटा प्राथमिक इञ्जिन प्रयोग गरिएको थियो।
थुप्रै विशेषज्ञहरुले ह्वसङ–१५ को इञ्जिनलाई शीतयुद्धकालमा अमेरिकाले विकास गरेको टाइटान २ क्षेप्यास्त्रको इञ्जिनसँग तुलना गरेका छन्। सन् १९८७ देखि उत्पादन बन्द गरिएको टाइटान २ अमेरिकाले निर्माण गरेकोमध्ये सबैभन्दा विशाल र गह्रौँ क्षेप्यास्त्र थियो। यसले ९ मेगाटनको न्युक्लियर वारहेड १५ हजार किलोमिटरसम्म पुर्‍याउनसक्थ्यो। जसमा हिरोसिमामा खसाइएको आणविक बमभन्दा ६०० गुणा बढी विस्फोटक पदार्थ हुन्थ्यो। बुधबारको परीक्षणपछि उत्तर कोरियाले ह्वसङ–१५ ‘सबैभन्दा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र भएको र उत्तर कोरियाले राखेको लक्ष्य पूरा भएको’ बताएको छ। तर विशेषज्ञहरु उत्तर कोरिया यहीँ नरोकिने तर्क गर्छन्। ‘प्राप्त गरेको यति सफलताले नै अमेरिकालाई वार्तामा ल्याउन पर्याप्त नहुने उनीहरुले महसुस गर्न सक्छन्,’ स्मर्लर भन्छन्। ‘यदि ह्वसङ-१५ ले उत्तर कोरियाको लक्ष्य पूरा भए पनि उनीहरुले सन्तुष्ट हुनका लागि अर्को परीक्षण जरुर गर्नेछन्,’ डुइट्सम्यान भन्छन्।
उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई लिएर विशेषज्ञहरुले पटकपटक संदेह जाहेर गर्दै आएका थिए। केहीले वास्तविक आणविक हतियार (न्युक्लियर वारहेड) बोकेर उत्तर कोरियाली अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्तिकै चुस्त रुपमा निशानामा नपुग्ने तर्क गर्दै आएका थिए। तर बुधबारको परीक्षणपछि त्यस्ता विश्लेषकहरुले पनि उत्तर कोरियाली खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
ह्वसङ-१५ परीक्षण (बायाँ) र ह्वसङ-१४ (दायाँ)
यद्यपि उत्तर कोरियाको हतियार मोहसँग जुध्न शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग निकै कम विकल्प छन्। थुप्रैको विश्लेषण के छ भने आणविक हतियार विकासको यो चरणमा आइसकेपछि उत्तर कोरिया आफ्ना हतियार त्याग्न तयार हुनेछैन। त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरुले आणविक शक्तिसम्पन्न उत्तर कोरियालाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा ठूलो रक्तपात निम्त्याउन सक्ने केही विश्लेषकले बताएका छन्। एजेन्सी